Hooyo Raali ahow Jamac Muse Jaamac – Murtimaal
Hooyo Raali ahow Jamac Muse Jaamac
01/18/2017 Video News NEWS
Hooyo raalli ahow Qalinki Jaamac Muse Jaamac
Waa xalay, 8.45 fiidnimo. Xaafadda Xalane, magaalada Boorame, jagada bannaan ee dhagaxa yari yaal, ee dayrka iyo guriga dhisan u dhaxaysa. Saddex bacood oo madmadow. Saddex ey oo midabyo leh. Gurxan iyo sanqadho dhiillaysan. Nafo soo ambaday oo aan se doonayn inay si yar dib ugu noqdaan halkan. Mid waxa ku jira bootar, saliid ‘baby oil’, saabuun, qasacad caano balaadi ah iyo laba tuwaal oo yaryar. Bacduna afkay ka xidhan tahay.
Labada bacood ee kale, ee iyana madmadow, afka kama xidhna. Midna Samir baa ku jirta, midna Nasiib. Samir way ooyaysaa, Nasiibna lugahay ka girifgirifsiinaysaa. Samir waa qayladhaan oo farriin bay diraysaa oohin ay sii marinayso, Nasiibna waa difaac oo girifgirita lugeheedu saqandha ay ku samayseynayaan bacda ayay eyda meesha ka gurxamaysaa ku dhici la’yihiin.
Samir iyo Nasiib waxay xidhan yihiin laba diric oo shiid ah, mid waa madow midina waa casuus dhalaal xiga. Xudduntiibaa ku taalla labadaba oo aad mooddo inay xorgogtay. Waa mataano. Qiyaastii laba caanamaal uun bay go’nayd xundhurtu.
Afada ku soo raagtay shaqada ee meesha maraysay ayaa maqashay gurxanka eyda iyo sanqadha dhiillaysan. Way soo qaadatay labadii hablood. Jaarka xaafadday u yeedhay. Saldhiggaa la geeyey. Xalay way seexisay oo sharcidarraa loogu oggolaaday inay hayso. Xaafaddu caanay usoo ururisey. Saakan waa loo sharciyeeyoo labada magaca ee Nasiib iyo Samir ayaa loogu magacbixiyey, odeygeeda oo aanay carruur hore isu dhalinna waa lagu qorey.
Hooyadii dhashaay raalli noqo. Waan kula damqanayaa. Danbiga bulshadaa iska leh. Eed lagaa galay. Xanuunka markaad bacda sahayda u diyaarinaysay wuu ka daran yahay kii markii aad foolanaysay ku hayay. Kii wallacii, iyo kii culayska laba mataanood. Waan hubaa xanuunkaas. Ma dareemi karayo anigu inta uu leegyahay oo aduunbaa dareemi karee, hooyo raali ahow. Bulshooy dib isugu noqo. Aammus oo isla showr kaligaa. Wax wayn baa innaga dumay. Hooyo adiguna raalli ahow mar kale.
FG. Sheekadu waa dhab, waana xalay, waxa uun beddelan magacyada loo bixiyey hablaha; mataanuhuna maanta reerkoodii cusbaa bay la joogaan waanay caafmaad qabaan. Alle ha barakeeyo.
Previous Post:War Hadda Soo dhacay fanaan caan oo xaalad caafimaad loo dhigay cisbataalka hargysa
Next Post:Daawo way kufsadeen waxay ka duubaan muuqaal ay ku rakaateeyeey si ay markay u baahato ugu timaado